Umqhubi weCleveland Launcher TL310 ngumzekelo ukusuka ku-2011 Cleveland Ultralite uchungechunge ojoliswe kwi-golfers engezantsi.
Ubungcono kunomgama omde
Mhlawumbi kakhulu phantsi kwebhola yebhola kubadlali begalufu
Isisindo esipheleleyo seCleveland Launcher TL310 singama-310 amagremu
I-shaft ye-stock is 59-gram Miyazaki C. Kua
Ifumaneka kwi-A, R, S kunye ne-X
I-Lofts: 8.5, 9.5 no-10.5 degrees kwi-RH; 9.5 no-10.5 kwi-LH
I-MAP ngexesha lokukhululwa laliyi $ 299
Ukuhlaziywa: I-Cleveland Launcher TL310 Umqhubi
Ngo-Apreli 26, 2011 - Abagaluli abafuna ukufumana iireyithi ezimbalwa ukusuka kwiimoto zabo banomcimbi obalulekileyo wokuqwalasela. Kule meko, mhlawumbi kungabikho kobunzima obubalulekileyo. ICleveland iGrafu iyakhanyisa. Umgca we-Launcher Ultralite umzila wabashayeli, owethulwa ekuqaleni kuka-2011, uquka izinto ezincinci ezidibanisa nabaqhubi abancinane.
Umgca wokuLauncher weCleveland wabaqhubi uye waba nemibono engaphezulu kuneJoan River, kwaye i-Ultralite iteration ibonisa i-group of drivers. Ngoxa abagadi begalufu bengenakukwazi ukuba yintoni i-270, i-290 okanye i-310 gram efana nayo, iCleveland iye yatshintsha kakuhle iinqweliso ukuba ihambelane kakuhle kunye neeklasi ze-golf ze-swing kunye namanqanaba ekhono. Imodeli engama-270-gram ye-swinger ehamba phambili kunye ne-handicap-middle. Umzekelo we-290-gram ngowomdlali ophakathi kwendawo yokukhubazeka onokukhawuleza.
Umzekelo we-310 weTyelelo - lowo sihlaziyayo - iithagethi kumdlali onokukhubazeka. Kufuneka kuphawulwe ke, ukuba zonke iimodeli zifumaneka ngeendidi ezahlukeneyo ze-shaft flexes. I-shaft flex options zibonisa ukuba ngelixa iCleveland icebisa la maqela omzimba, kukho iindawo zokuzonwabisa.
Ezi zinkundla zenza njani? Kakuhle kakhulu. Umqhubi wavavanywa, iCleveland Launcher TL310, wayehlala ehlawula ukuhlawula njengeqela le-handicaper. Intloko ye-440cc ibonisa ukuba ngabaphi abagadi begalufu abaye bavakalisa, ukuba bafuna inkokheli yomqhubi wesintu. Ngama-intshi angama-45.25, ubude buya kulawulwa kwaye buhambelana nomoya wabaqhubi bexesha elide. Kodwa, ngaba kukho ubude ngaphezu kwekhosi? Impendulo nguyebo. Ekuvavanyeni ngeentlobo ezahlukeneyo zegalufu ze-golfers eziphantsi, sabona ukuzuza kwemida yee-5 ukuya kwii-9 iiyadi-kwaye sinokuvakalelwa kwaye sisandi.
Yintoni ekhangayo ngale nkcazo yinkathalo ethathwe nguCleveland ukuthatha i-shaftmark ye-shaftmark, i-59-gram iMyazaki C. Kua, kwaye idibanise ubungqina bendoda kunye nobukhulu kuyo yonke iklabhu. Ndandingacingi ukuba i-shaft elula kakhulu iya kuvelisa i-ballflight ephaphaza, ehlabayo ekhethwe ngabadlali abanokukhubazeka. Nangona kunjalo, i-trajectory ne-shaft shaft yayingaphantsi kwamanye amaninzi amaninzi, amanqabileyo aphakamileyo apho. I-mantra yokuqaliswa kunye ne-spin igcinwe yiCleveland Launcher TL310. Ukuqalisa nokukhupha amanani abonwayo ekuvavanyeni kubonisa ukuba iCleveland inesidima (esilula) somqhubi kwi-Launcher TL310.
Uluhlu lwezinto ezixhasayo
Ponce de Leon kunye noMthombo woLutsha
Kubaluleke Kangakanani Unqulo?
Ngaba ndimele ndikhathazeke ngezinto ezidlulayo?
Uhlalutyo lwe "Ibali leHora" nguKate Chopin